Movie & Video – Myanmar Info Hub
Home Entertainment Movie & Video
in : Entertainment, Movie & Video
လူစွမ်းကောင်း ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးမှ ထုတ်လုပ်ပြီး ဒါရိုက်တာ စတီးလ် (ဒွေးမေတ္တာ) ရိုက်ကူးထား သည့် ”တည်ကြက်”ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကား စာနယ်ဇင်း အကြိုမိတ်ဆက်ပွဲ အခမ်းအနားကို စက်တင်ဘာ ၃ဝ ရက် နံနက် ၇ နာရီခွဲက ရန်ကုန်မြို့ သမ္မတ အဆင့်မြင့်ရုပ်ရှင်ရုံ၌ ပြသခဲ့ပြီး အောက်တိုဘာ ၅ ရက်မှ စတင်၍ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးရှိ အဆင့်မြင့် ရုပ်ရှင်ရုံကြီးများတွင် ပြသသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ သရုပ်ဆောင် နေတိုးက ”ဒီဇာတ်ကားထဲမှာ လမ်းပြတစ်ယောက်အနေနဲ့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင် ထားတာပါ။ မိန်းကလေး ခြောက်ယောက်နဲ့ တောထဲမှာ ကြမ်းတမ်းတဲ့ ခရီးကိုဖြတ်သန်းရင်း အခက်အခဲ အဖြစ်အပျက်တွေ ကြုံတဲ့အခါ ဦးစီး ဦးဆောင်လုပ်ပေးတဲ့ လမ်းပြတစ်ယောက်ပုံစံမျိုးပါ။ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးအနေနဲ့ အခုလို စွန့်စားတဲ့ ဇာတ်ကားမျိုးရိုက်တာ ဒါဟာ ပထမဆုံးပါပဲ။ မင်းသား ၊ မင်းသမီးတွေ အကုန်လုံးက ဒီဇာတ်ကား …
မျက်ခြယ်ရုပ်ရှင်နှင့် ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိရေးက စီစဉ်ရိုက်ကူးထုတ်လုပ်သည့် ”ပြန်ပေး”ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား စာနယ်ဇင်းအကြိုမိတ်ဆက်ပွဲ ကို ယနေ့ နံနက် ၇ နာရီခွဲက ရန်ကုန်မြို့ သမ္မတအဆင့်မြင့်ရုပ်ရှင်ရုံ၌ ပြသခဲ့ပြီး သြဂုတ် ၃ ရက်မှ စတင်၍ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးရှိ အဆင့်မြင့်ရုပ်ရှင်ရုံကြီးများတွင် ပြသသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါ ဇာတ်ကားကို ဒါရိုက်တာ ကိုဇော် (အရုဏ်ဦး)က ရိုက်ကူးထားခြင်းဖြစ်ပြီး လူတစ်ဦး နှင့်တစ်ဦး လိမ်လည်လှည့်ဖြားပုံ၊ မိမိကိုယ်ကိုယ် လည်လှပြီဟု ထင်နေသော်လည်း မိမိထက်လည် သောသူများ အမြဲရှိနေတတ်ပုံ၊ အပြိုင်အဆိုင် လူလည်ကျနေတတ်ပုံတို့ကို ပညာပေးသည့် အနေ ဖြင့် ဟာသဆန်ဆန် ရိုက်ကူးထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ယင်း ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားသည် ရန်အောင်၊ လူမင်း၊ ခန့်စည်သူ၊ ခိုင်သင်းကြည်၊ မိုးဟေကိုနှင့် အခြားသော အနုပညာရှင်များစွာဖြင့် ပုံဖော်ထား သော ရယ်ရွှင်ဖွယ်ရာ ကျေးလက်သရုပ်ဖော် ဟာသ ဇာတ်မြူး ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးဖြစ်ကြောင်း …
ဘော်ဘော်ကထှော် ဟာသရုပ်ရှင်ဇတ်ကားကြီးကို 13.7.2018 ရက်နေ့မှစတင်၍ ရုံတင်ပြသပါမည်။ ကဲပရိသတ်ကြီး ထုံးစံအတိုင်း အားလပ်ရက်လေးမှာ မိသားစု ချစ်သူခင်သူတွေနဲ့ ရီလိုက်ကြပါအုံးဗျာ ရန်ကုန် သမ္မတ – 01-246962, 01-246963 သွင် – 01-372594, 01-388033, 09-7323 5560 မင်္ဂလာ (သိမ်ကြီးဈေး) – 01-243057, 01-243058 မင်္ဂလာဒဂုံစင်တာ (၂) – 09-732 54091, 09-732 54092 မင်္ဂလာစံပြ – 09-260887035, 09-260887036, 01-230316 မင်္ဂလာဂမုန်းပွင့် (လှည်းတန်း – စံရိပ်ငြိမ်) – 09-779054671, 09-7790 546 72, 09-7790 546 73 မန္တလေး ၀င်းလိုက် – 02-39128, 02-60291 မင်္ဂလာမန်းနေပြည်တော် (ဆိုင်းတန်း) – 09-960911211, …
Avengers: Infinity War ဇတ်ကားကြီးအား April, 27မှာ နိုင်ငံတကာနဲ့ တစ်ပြိုင်တည်းပြသဖို့ Mingalar Cinemas မှစီစဉ်လျှက်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်။ MARVEL က Heros ဇတ်ကောင်များကို အစဉ်တစ်စိုက်အားပေးကြတဲ့ လူကြီးလူငယ်အားလုံး အကြိုက်တွေ့မဲ့ဇတ်ကားဖြစ်ကြောင်း သတင်းပေးလိုက်ပါတယ်.. Video Trailer လေးကို အစမ်းမျှဝေခံစားကြည့်ကြပါအုံးခင်ဗျ
၁၄ နာရီအတွင်း ကြည့်ရှုသူ လေးသန်းကျော်သွားတဲ့ Jurassic World: Fallen Kingdom – Final Trailer
ဒိုင်နိုဆောတွေက ကြောက်စရာအရမ်းကောင်းတာ မှန်ပေမဲ့ လူတွေက ပိုပြီး ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတာ Jurassic World: Fallen Kingdom ရဲ့ နမူနာထဲမှာ မြင်တွေ့ရပါတယ်။ Jurassic World ဇာတ်လမ်းတွေထဲမှာ ကြည့်လို့ အလန်းဆုံး မြင်ကွင်းတွေကို ဒီနမူနာထဲမှာ မြင်တွေ့ရပြီး လူတွေက ဘာလို့ Jurassic Park ကို ပြန်လာကြတယ်ဆိုတာကိုလည်း သိရှိလိုက်ရပါတယ်။ Blue ဆိုတဲ့ ဒိုင်နိုဆောမလေးက သူတို့မျိုးစိတ်ထဲမှာ နောက်ဆုံးကျန်ရှိတဲ့ ဒိုင်နိုဆောတစ်ကောင်ဖြစ်ပြီး ထရိန်နာ Owen Grady (Chris Pratt) ဟာ သိပ္ပံစမ်းသပ်မှုတွေ ထပ်မံပြုလုပ်ဖို့အတွက် Blue ကို ကယ်တင်ဖို့ တာဝန်ပေးခံရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Bule ကို ကယ်တင်တာဟာ ယုတ်မာတဲ့ အကြံအစည်တွေရှိနေတယ်ဆိုတာကို Owen တစ်ယောက် သိရှိသွားခဲ့တယ်။ ဒိုင်နိုဆောတွေက အန္တရာယ်ပေးနိုင်တဲ့အကောင်တွေ ဖြစ်ပေမဲ့ ယုတ်မာပက်စက်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ …
လရောင်ဖြာတဲ့အင်းလေးမှာ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား ဇန်နဝါရီလ ၅ ရက်နေ့တွင် ရုံတင်ပြသမည်
ဝါဝါဝင်းရွှေရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးမှ ရိုက်ကူးတင်ဆက်သောလရောင်ဖြာတဲ့ အင်းလေးမှာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၅ ရက်နေ့တွင် ရုံတင်ပြသမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ လရောင်ဖြာတဲ့အင်းလေးမှာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကိုလူ့ဘဝသည် ဆန်းကြယ် သောသဘောရှိပြီးလူ့ဘဝများစွာထဲမှ ဘဝတစ်ခုကိုထင်ဟပ်ပြသလိုခြင်း၊ အင်းလေးဒေသ၏ သာယာပုံများ၊ ကြည်နူးဖွယ်မြင်ကွင်းများ၊ အင်းလေး ဒေသတွင် နေထိုင်သောအင်းသူအင်းသားတို့၏ ရိုးသားမှု၊ စိတ်သဘော ထားဖြူစင်မှုတို့ကိုခံစားတတ်စေရန်၊ ဆေးသုတေသနပြုရန် စိုက်ပျိုး ထားသော အပင်တစ်ပင်မှ အသီးကိုမှားယွင်းစားသုံးမိရာမှ ဇီဝဖောက်ပြန် သွားပုံ မှ သင်ခန်းစာယူတတ်စေရန်၊ ညီတစ်ယောက်အပေါ်တွင် ထားရှိသောအစ်ကိုတစ်ယောက်၏ မေတ္တာတရားကိုသိမြင်စေရန် ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့်ရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားပြီးမေတ္တာဖွဲ့ဒရမ်မာဇာတ်လမ်းအမျိုးအစားဖြစ်သည်။ အဆိုပါရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွင် ထပ်ဆင့်အကယ်ဒမီနေတိုး၊ ဝါဇင်၊ ထပ်ဆင့်အကယ်ဒမီဝတ်မှုံရွှေရည်၊ စုမြတ်နိုးဦးနှင့် ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် အနုပညာရှင်များပါဝင်ပြီးအနုပညာအကြံပေးအဖြစ် အကယ်ဒမီများရှင် ဝါဝါဝင်းရွှေ၊ ဇာတ်လမ်းဇာတ်ညွှန်းအနေဖြင့် မင်းခိုက်စိုးစံ၊ထက်မြတ်နိုင်ဇင် တို့ဖြစ်ကာတွဲဖက်ဒါရိုက်တာမှာဝင်းထွဋ်ဝင်းဖြစ်ပြီးဒါရိုက်တာအကယ်ဒမီ ညွှန့်မြန်မာညီညီအောင် ရိုက်ကူးထားသောရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးဖြစ်သည်။ Credit to: ဒင်ချစ်ဝင်း၊ ဓာတ်ပုံ – တင်စိုး
၁၇.၁၁.၁၇ မှ ၂၃.၁၁.၁၇ ထိ Mingalar Cinemas ရုပ်ရှင်ရုံများတွင် ပြသမည့်ဇတ်ကားများ
***ဖေ့စ်ဘုတ်ဘုရင်မ*** မင်္ဂလာ(သိမ်ကြီးဈေး) – ၂၄၃၀၅၇ ၊ ၂၄၃၀၅၈ Top Royal ပါရမီ စိန်ဂေဟာ – ၀၉၄၂၀၁၈၆၂၉၁ ၊ ၀၉၄၂၀၁၈၆၂၉၂ ရှေ့ဆောင် – ၂၅၂၁၁၃၊ ၃၈၈၀၃၄၊ ၀၉၄၅၇၈၄၂၈၈၀၊ ၀၉၄၅၇၈၄၂၈၈၁ မင်္ဂလာဒဂုံစင်တာ၂ – ၀၉၇၃၂၅၄၀၉၁ ၊ ၀၉၇၃၂၅၄၀၉၂ မင်္ဂလာစံပြ – ၀၉၂၆၀၈၈၇၀၃၅ ၊ ၀၉၂၆၀၈၈၇၀၃၆ ၊ ၀၁၂၃၀၃၁၆၅ ဂမုန်းပွင့် (လှည်းတန်း-စံရိပ်ငြိမ်) – ၀၉၇၇၉၀၅၄၆၇၁၊ ၀၉၇၇၉၀၅၄၆၇၂ မင်္ဂလာ ၀ဇီရာ – ၀၉၂၆၁၉၀၁၁၅၅ ၊ ၀၉၂၆၁၉၀၁၁၆၆ မန္တလေး မြို့မ – ၃၉၁၃၆ ၊ ၃၉၁၃၇ မန်းနေပြည်တော် (ဆိုင်းတန်း) – ၀၉၉၆၀၉၁၁၂၁၁ ၊ ၀၉၉၆၀၉၁၁၃၁၁ မင်္ဂလာဒိုင်းမွန်း – ၀၉၄၀၂၇၆၅၆၄၁ ၊ ၀၉၄၀၂၇၆၅၆၄၂ …
အိန္ဒိယရုပ်ရှင်ကားကို အခြေပြုမှီငြမ်းထားသည့် ”တာတေကြီး ”ဇာတ်ကားယခုလလယ်ရုံတင်ပြသမည်
အိန္ဒိယရုပ်ရှင်ကားကို အခြေပြုမှီငြမ်းထားသည့် ”တာတေကြီး ” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို လူစွမ်းကောင်းရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးမှ ထုတ်လုပ်ရိုက်ကူးထားပြီး အကယ်ဒမီနေတိုးနှင့် ရွှေသမီးတို့က အဓိက ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားကြကာ သရုပ်ဆောင် ဇော်ဦး၊ ညီဂျော်၊ ကိုကိုဦး၊ အောင်မိုး၊ ဦးဝင်းမြိုင်၊ သိင်္ဂီထွန်း၊ ဒေါ်နွဲ့နွဲ့စန်း၊ ချောချော၊ စင်သီယာ၊ အိစိကွေး၊ ဇာဇာဘုန်းမြတ်နှင့် သရုပ်ဆောင်များစွာတို့ကလည်း အားဖြည့်ပါဝင်ထားကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါဇာတ်ကားတွင် ဘွဲ့ရပြီးခါစ လူငယ်တစ်ယောက်ဖြစ် သည့် ရဲခေါင် (နေတိုး ) သည် အပေါင်းအသင်းမက်သူတစ်ယောက် ဖြစ်ပြီး သူငယ်ချင်းတွေကြားမှာလည်း ပြဿနာတစ်ခုခုဖြစ်ပြီဆိုရင် ရှေ့ကဦးဆောင်ကာ ဖြေရှင်းတတ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ သို့သော် သူ၏ အားနည်းချက်က သရဲကြောက်တတ်သည့်စိတ်၊ ထိုအားနည်း ချက်ကြောင့်ပင် သူငယ်ချင်းတွေနှင့် မိသားစုတွေက သရဲဆိုတာ တကယ်မရှိကြောင်းပြောသော်လည်း ရဲခေါင်က လက်မခံနိုင်ဖြစ်ခဲ့ပြီး ကြောက်ရွံ့စိတ်ကသာ ကြီးစိုးနေသည်။ ထို့ကြောင့် ရယ်စရာ၊ စနောက် ချင်စရာဖြစ်နေခဲ့သည်။ သူမည်မျှအထိ သရဲကြောက်သနည်းဆိုပါက …
၁၀.၁၁.၁၇ မှ ၁၆.၁၁.၁၇ ထိ Mingalar Cinemas အဆင့်မြင့်ရုပ်ရှင်ရုံများတွင် စီစဉ်တင်ဆက်လိုက်သောဇာတ်ကားများမှာ
Mingalar Cinemas အဆင့်မြင့်ရုပ်ရှင်ရုံများတွင် အများပြည်သူအပန်းဖြေကြည့်ရှု့နိုင်ရန်စီစဉ်တင်ဆက်လိုက်သောဇာတ်ကားများမှာ ***မယားကြောက်ရွာ*** ရန်ကုန် Mingalar Cineplex. ဂမုန်းပွင့် (လှည်းတန်း-စံရိပ်ငြိမ်) – ၀၉၇၇၉၀၅၄၆၇၁၊ ၀၉၇၇၉၀၅၄၆၇၂ သမ္မတ – ၂၄၆၉၆၂ ၊ ၂၄၆၉၆၃ သွင် – ၃၇၂၅၉၄ ၊ ၃၈၈၀၃၃ မင်္ဂလာစံပြ – ၀၉၂၆၀၈၈၇၀၃၅ ၊ ၀၉၂၆၀၈၈၇၀၃၆ ၊ ၀၁၂၃၀၃၁၆၅ Top Royal ပါရမီ စိန်ဂေဟာ – ၀၉၄၂၀၁၈၆၂၉၁ ၊ ၀၉၄၂၀၁၈၆၂၉၂ မန္တလေး ၀င်းလိုက် – ၃၉၁၂၈ ၊ ၆၀၂၉၁ မန်းနေပြည်တော် (ဆိုင်းတန်း) – ၀၉၉၆၀၉၁၁၂၁၁ ၊ ၀၉၉၆၀၉၁၁၃၁၁ မန္တလေး – မင်္ဂလာဒိုင်းမွန်း – ၀၉၄၀၂၇၆၅၆၄၁ ၊ ၀၉၄၀၂၇၆၅၆၄၂ ပြည် – မင်္ဂလာထွန်းသီရိ …
၃.၁၁.၁၇ မှ ၉.၁၁.၁၇ ထိ Mingalar Cinemas ရုပ်ရှင်ရုံများတွင် ပြသမည့်ဇာတ်ကားများ
***မယားကြောက်ရွှာ*** ရန်ကုန် Mingalar Cineplex. ဂမုန်းပွင့် (လှည်းတန်း-စံရိပ်ငြိမ်) – ၀၉၇၇၉၀၅၄၆၇၁၊ ၀၉၇၇၉၀၅၄၆၇၂ သမ္မတ – ၂၄၆၉၆၂ ၊ ၂၄၆၉၆၃ သွင် – ၃၇၂၅၉၄ ၊ ၃၈၈၀၃၃ မင်္ဂလာ(သိမ်ကြီးဈေး) – ၂၄၃၀၅၇ ၊ ၂၄၃၀၅၈ မင်္ဂလာစံပြ – ၀၉၂၆၀၈၈၇၀၃၅ ၊ ၀၉၂၆၀၈၈၇၀၃၆ ၊ ၀၁၂၃၀၃၁၆၅ Top Royal ပါရမီ စိန်ဂေဟာ – ၀၉၄၂၀၁၈၆၂၉၁ ၊ ၀၉၄၂၀၁၈၆၂၉၂ မန္တလေး ၀င်းလိုက် – ၃၉၁၂၈ ၊ ၆၀၂၉၁ မြို့မ – ၃၉၁၃၆ ၊ ၃၉၁၃၇ မန္တလေး – မင်္ဂလာဒိုင်းမွန်း – ၀၉၄၀၂၇၆၅၆၄၁ ၊ ၀၉၄၀၂၇၆၅၆၄၂ ပြည် – မင်္ဂလာထွန်းသီရိ …